रुसमा सर्वसाधारणलाई पनि दिन थालियो भ्याक्सिन, अब भारतमा पनि परीक्षण हुने – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/रुसमा सर्वसाधारणलाई पनि दिन थालियो भ्याक्सिन, अब भारतमा पनि परीक्षण हुने
रुसमा सर्वसाधारणलाई पनि दिन थालियो भ्याक्सिन, अब भारतमा पनि परीक्षण हुने
रुसी भ्याक्सिन ‘स्पुतनिक पाँचौ’ को पहिलो सेटको सार्वजनिक वितरण सुरु भइसकेको रुसी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ११ अगस्टमा रुसले यस भ्याक्सिनलाई दर्ता गरेको थियो ।
मस्कोस्थित गामालिया रिसर्च इन्स्टिच्युुट अफ इपिडेमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजीले विकास गरेको यस भ्याक्सिनको आवश्यक गुणस्तर जाँच भइसकेको र सर्वसाधारणमाझ वितरणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको छोटो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार रुसभर वितरणका लागि भ्याक्सिनका अन्य सेटहरु पनि तयार अवस्थामा छन् ।
पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण पास गरेको यस भ्याक्सिनलाई तेस्रो चरणमा परीक्षण हुन अगावै रुसले स्वीकृति दिएको हो । रुस सरकारले तेस्रो चरणको परीक्षण र सर्वसाधारणमा भ्याक्सिन लगाउने काम एकसाथ अघि बढ्ने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो, पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकहरु रहने पनि बताइएको थियो ।
स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार अब तेस्रो चरणको परीक्षणसँगै रुसका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तारित रुपमा भ्याक्सिन वितरण हुनेछ । तेस्रो चरणमा ४० हजार जनामा भ्याक्सिन परीक्षण गर्ने रुसको योजना छ ।
भारतमा यसै महिना परीक्षण
रुसी डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डका सिईओ किरिल डिमिट्रिभले यसै महिना भारतसहितका देशमा भ्याक्सिनको परीक्षण सुरु हुने बताएका छन् । रुसले यसअघि नै युुएई, साउदी अरेबिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, मेक्सिको, ब्राजिल, भारतसहितका कम्तिमा २० देशले परीक्षणका लागि इच्छा देखाएको जनाएको थियो । भ्याक्सिन लिइसकेका रुसका रक्षामन्त्री सर्जेइ सोइगुले आफुले कुनै साइड इफेक्ट महसुस नगरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘मैले सबै सहज महसुस गरेको छ ।
कुनै साइड इफेक्ट वा उच्च तापक्रम महसुस भएन । म सबैलाई भ्याक्सिन लगाउन सल्लाह दिन्छु,’ शनिबार उनले रुसी टेलिभिजनमार्फत भने । यसअघि बेलायतको प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लान्सेटले प्रकाशित रिर्पोटमा सबै सहभागीहरुमा एन्टिबडिज विकास भएको उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, भ्याक्सिनको कुनै साइड इफेक्ट नदेखिएको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । तर भ्याक्सिनको प्रभावकारीतको पूर्ण जाँच गर्न अझै धेरैमा परीक्षण गरे आवश्यक रहेको यस अध्ययन रिपोर्टले सुुझाव दिएको थियो । रुसले २०२० सम्म २२ करोड डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने योजना राखेको छ ।
रुसमा संक्रमितको संख्या १० लाख नाघिसकेको छ । तर, १ सेप्टेम्बरदेखि नै रुसले विद्यालयहरु खोलिसकेको छ । रुसमा अहिले दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा नयाँ कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । कक्षाकोठामा निश्चित सुरक्षा मापदण्ड कायम गरेर विद्यालयहरु खोलिएको हो ।
रुसले शिक्षकहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा भ्याक्सिन लगाइने जनाएको छ । यद्यपी, रुसमा ठूलो संख्यामा स्वास्थकर्मी र शिक्षकहरुले भ्याक्सिन लिन अस्विकार गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुमा छाएको छ ।
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ,त्मह,त्या गरे !
लद्दाखमा चिनियाँ सैनिकद्वारा भारतीय सैनिकले गस्ती गर्ने १० भन्दा बढी स्थान कब्जा
भारतलाई झड्का : ल’डाइका लागि पाकिस्तान यस्तो तयारीमा रहेको खुलासा
बेरुतमा विनाश गर्ने अमोनियम नाइट्रेट के हो ? कुन काममा उपयोग गरिन्छ ?